जीवनदेखि भाग्नेहरू - विशेष - साप्ताहिक
आधुनिक समाजमा आत्महत्या एउटा ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदैछ । जीवनमा प्राप्त असफलता, आवेश, असन्तुष्टि, निराशा, मानसिक समस्या, आर्थिक अभावजस्ता विविध कारणले मानिसहरू आफूले स्वयंलाई सिध्याउने बाटो रोजिरहेका छन् । जीवनदेखि भागेर आत्महत्यामार्फत स्वयंलाई भौतिक रूपमा सिध्याउनेहरूको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा थप वृद्धि हुने क्रममा छ ।
आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट थुप्रै प्रयास भए पनि अहिलेसम्म खासै उपलब्धि भने हुन सकेको छैन, जुन कुरा निरन्तर बढिरहेको आत्महत्या गर्नेहरूको संख्याले प्रमाणित गर्छ ।
आखिर के हो आत्महत्या ? किन हुन्छ आत्महत्या ? समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले आत्महत्यालाई सामाजिक परिघटना भनेका छन् । उनले कुनै पनि आत्महत्याका पछाडि सामाजिक कारण रहने कुरा उल्लेख गरेका छन् । दुर्खिमका अनुसार आत्महत्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीति कारणले हुन्छ । समाजशास्त्री डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की मनुष्य देहको अन्त्य गर्नु नै आत्महत्या भएको बताउँछन् । ‘मनुष्य देहको अन्त्य गर्ने कुरा नै आत्महत्या हो,’ कार्की भन्छन्, ‘यो सामाजिक, मानसिक एवं मनोविज्ञानको कुरा पनि हो ।’ कार्कीका अनुसार जीवनप्रति मानिसको वितृष्णा पलाएका कारण मानिसले आत्महत्या गर्ने हो । ‘त्यसमा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राज्यसँग जोडिएका विविध कारण होलान् । यी सबै कारणले विरक्त भएर नै आत्महत्या गर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।
मानसिक रोगका चिकित्सक डा. अनन्तप्रसाद अधिकारी व्यक्तिले आफूलाई समाप्त गर्ने विचार आएर कुनै माध्यमबाट जीवन समाप्त पार्ने कार्य नै आत्महत्या भएको बताउँछन् । ‘व्यक्तिमा आफूलाई समाप्त पार्ने विचार आउँछ । उसले कुनै माध्यमबाट जीवन समाप्त पार्छ भने त्यस्तो कार्य आत्महत्या हो,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘व्यक्ति मानसिक रोगले ग्रसित भएर तनाव झेल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर जीवनलाई सम्पूर्ण रुपमा कालो देख्न थाल्छ र कतै उम्कने बाटो नपाएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्छ ।’ नेपालमा आत्महत्याको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा मात्र २० हजार ९ सय ६७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । उक्त अवधिमा आत्महत्या दर औसत वर्षमा ७ दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भैरहेको पाइन्छ । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दैनिक औसत १५ जनाको मृत्युको कारण आत्महत्या हुने गरेको छ ।
आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने युवाहरूको संख्या झस्काउने खालको छ । प्रहरीको तथ्यांकमा आधारित रहेर विश्लेषण गर्दा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउने झन्डै १९ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा ५६ प्रतिशत छन् । चार वर्षको अवधिमा आत्महत्या गर्नेमध्ये ८ हजार ४ सय ४२ जना महिला छन् भने ११ हजार ९७ जना पुरुष छन् । जसमध्ये १ हजार १ सय ८८ जना बालबालिका छन्, तीमध्ये ५ सय ७ जना बालक एवं ६ सय ८१ जना बालिकाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार आपराधिक क्रियाकलापबाट हुने कुल मृत्युमध्ये ४५ प्रतिशत मृत्यु आत्महत्याबाट भएको पाइएको छ । नेपालमा आत्महत्याबाट हुने कुल मृत्युमध्ये १ प्रतिशत मृत्यु आत्महत्या दुरुत्साहनबाट हुने गरेको प्रहरीको विश्लेषण छ  ।
चार वर्षमा आत्महत्या गर्नेको संख्या
०७५/७६ : ५,७८५
०७४/७५ : ५,३४६
०७३/७४ : ५,१३१
०७२/७३ ः ४,७०५
जम्मा : २०९६७
-तथ्यांकहरूको स्रोत नेपाल प्रहरी
डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की समाजशास्त्री
मनुष्य देहको अन्त्य गर्नु आत्महत्या हो । आत्महत्या किन हुन्छ ? मनुष्य देहप्रति मानिसको वितृष्णा पलाएका कारण मानिसले आत्महत्या गर्ने हो । त्यसमा केही व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राज्यसँग जोडिएका कारणहरू होलान् । यिनै कारणहरूबाट विरक्त भएपछि मानिस आत्महत्या गर्न पुग्छ । आत्महत्या सामाजिक, मानसिक एवं मनोविज्ञानको कुरा पनि हो । आत्महत्यासम्बन्धी दुई दृष्टिकोण छन्— एक पूर्वीय परम्परागत आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा अर्को वैज्ञानिक दृष्टिकोण ।
अध्यात्मिक दृष्टिकोणमा आत्महत्या भनेको आत्मघात तथा जघन्य अपराध हो । यो कार्यबाट जन्म–जन्मान्तरसम्म पनि यसबाट मुक्त भइँदैन भन्ने धारणा छ । किनभने, मनुष्य चोलामा आउँदा हामीले यो जीवनमा अघिल्लो जीवनमा गरेको कर्मको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यसलाई पूरा गर्न नसकेर आवेशमा आएर विरक्तिएर, नैराश्य भाव आएर मनुष्य देहको अन्त्य गर्नुलाई हाम्रो धर्मशास्त्रले पाप मान्छ । यही मान्यताका आधारमा हिजोको समाजले आत्महत्या गर्न मानिसलाई हतोत्साहित गर्थ्यो । त्यसैले आत्महत्या पनि कम थियो ।
सुसाइडले जुन सामाजिक क्षेत्र निर्धारण गर्छ, त्यो विज्ञानमा आधारित समाजको कुरा हो । अहिले विज्ञानले यी सबै कुरा केही पनि होइन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । विज्ञानले महत्वाकांक्षा र भौतिक सुख सुविधाको कुरा बढाइदियो । त्यसकारण ब्रेक अप भयो, आत्महत्या । परीक्षामा असफल भयो, आत्महत्या । सुख, सुविधा पाएन आत्महत्याको बाटो रोज्ने क्रम बढ्दो छ । यस्ता विभिन्न भौतिक कारणले मानिसहरू सुसाइड गर्न थाले । दुःखबाट पार पाउने उपाय सुसाइड हो भन्ने हुन गयो । पश्चिमतिरको कुरा यहाँ पनि सिकियो । यसमा विज्ञान, प्रविधि एवं सूचनाको विकासले पनि असर गर्‍यो । हिजो र आजको ‘म’ के हुँ भन्ने कुरा नै फरक छ । केही राजनीतिक आन्दोलनका कारण पनि मानवजीवन वस्तुकरण हुन पुग्यो । मानव जीवनको मूल्य घट्न गयो, जसका कारण केही समययता नेपालमा आत्महत्या अविश्वनीय ढंगले बढेको पाइन्छ । अहिले नेपालमा दिनहुँ १५ जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्यांक छ । यसमा गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान जरुरी भैसकेको छ ।